မျက်နှာပေါ်က တင်းတိတ်တွေ ပျောက်ချင်လား?
မျက်နှာပေါ်က တင်းတိတ်တွေ ပျောက်ချင်လား? တင်းတိတ် တင်းတိတ် ပျောက်ချင်လား သံပုရာသီး နဲ့ အုန်းမုတ်ခွက် သွေးလိမ်းပါ လက်တွေ့ပါ ။ အုန်းမုတ် ခွက် သာ သက်သေ ကြည့် တော့ ။ သံပုရာသီး မသုံးပဲ အုန်းမုတ်ခွက်ပဲ သွေးလူး ပါက သုံးခါလောက် လူးပြီး မျက်နာပြင်ချောမွေ့ လာမည်ကို လက်တွေ့ သိရ ပါလိမ့်မည် ။ ။ “လူသိနည်းသော အုန်းမုတ်ခွက်ဆေးနည်းများ အခု ပြောပြမယ့် ခွက်ကလေးက အုန်းမှုတ်ခွက် လေးအကြောင်းပါ ။ ဖတ်ဖူးသမျှ နဲ့ ကိုယ်တွေ့ ဆေးဖက် ဝင်တဲ့ အုန်းမှုတ်ခွက် အကြောင်းလေးပါ ။ အညာဒေသရဲ့ …
“နားအူ နားကိုက် နားပြည်ယိုပါလျှင်” ဒီနည်းလေးတွေနဲ့ ကုသလို့ရပါတယ်
“နားအူ နားကိုက် နားပြည်ယိုပါလျှင်” ဒီနည်းလေးတွေနဲ့ ကုသလို့ရပါတယ် “နားအူ နားကိုက် နားပြည်ယိုပါလျှင်” နားကိုက် ခြင်းသည် အလွန်ပင် ခံစားရ ရခက်သည် ။ ညအချိန်တွင် ပိုမို ဖြစ်တတ် ရကာ ခံရဆိုးပါ၏ ။ ဖြစ်ရသည်မှာ ကိုယ်ခန္ဓာ ဖွဲ့စည်းမှု နှင့် လေဖိအား ကြောင့်လည်း ပါ၏ ။ နားကိုက် ခြင်းသည် များသော အားဖြင့် နားပြွန်များ ထဲတွင် အဆီးအတား ရှိနေ တတ်ပြီး ပိတ်ဆို့ နေခြင်းကြောင့် နားကိုက် ဝေဒနာ ခံစားရ တတ်ပါသည် ။ အသက်အရွယ် မရွေးခံစားရသည် မှန်သော် လည်း ကလေးအရွယ်တွင် ပို၍ …
ဆီးအိမ် ကျောက်တည် အတွက် ဗေဒါရဲ့ အစွမ်း
ဆီးအိမ် ကျောက်တည် အတွက် ဗေဒါရဲ့ အစွမ်း February 11, 2019 ဆီးအိမ် ကျောက်တည် အတွက် ဆေးနည်း ဆီးအိမ် ကျောက်တည် ရောဂါ အတွက် အစွမ်း ထက်တဲ့ ရိုးရာ ဆေးနည်း တစ်ခုကို ညွန်ပေးလိုက် ပါတယ် ။ ဒီ ဆေးနည်း ကတော့ စင်္ကာပူ ၊ မလေးရှား ၊ ထိုင်ဝမ် တို့မှာ နေထိုင် ကြတဲ့ တရုတ် လူမျိုး များရဲ့ ရိုးရာ ဆေးနည်း လို့ ဆိုကြ ပါတယ် ။ အလွန် လွယ်ကူ တဲ့ ဆေးနည်း ပါ ။ …
ဒုစရိုက်မှုမရှိတာကြောင့် အိမ်တိုင်း တံခါးမတပ်ထားတဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်း ရွာငယ်လေး
ဒုစရိုက်မှုမရှိတာကြောင့် အိမ်တိုင်းတံခါးမတပ်ထားတဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်းရွာငယ်လေး February 11, 2019 အိမ် တစ်အိမ် လုံခြုံဖို့ အတွက် တံခါးတွေ ဆိုတာ သိပ်ကို အရေးကြီး ပါတယ် ။ လူတိုင်း ညရောက်ပြီ ဆိုတာ နဲ့ အိမ်တံခါး တွေ ၊ ပြူတင်း ပေါက် တွေ ချက်ချ ထားလား ၊ သော့ခတ်ထားရဲ့လား ဆိုပြီး ပြန်စစ် တတ်ကြပါတယ် ။ တံခါး မပိတ်ထားလို့ ဆိုပြီး အလစ် သုတ်သွားတဲ့ အမှု တွေ ရှိ သလို ပိတ် ထားတဲ့ တံခါး တောင်မှ ဖျက်ဆီးပြီး အိမ်ထဲ ဝင်ခိုး …
ကမ္ဘာ့အမိုက်ဆုံး ကွန်ပျူတာ Showroom လို့ တင်စားခံနေရတဲ့ Raspberry Pi Show room
ကမ္ဘာ့ အမိုက်ဆုံး ကွန်ပျူတာ Showroom လို့ တင်စားခံနေရတဲ့ Raspberry Pi Show room February 11, 2019 Computer science အတွက် အထောက် အကူ ပြု single board computer တွေ ကို ထုတ်လုပ် ပေးနေ တဲ့ Raspberry Pi ကုမ္ပဏီ ကတော့ ပရောဂျက် အသစ် စက်စက် တစ်ခု ကို စတင် လိုက် ပါ ပြီ ။ Showroom ဖွင့် လှစ် လိုက်တာ ပါ ။ Showroom ကို တော့ …
ခံရခက်တဲ့ လည်ပင်း ကျီးပေါင်း ရောဂါ ကျွန် မ ကိုယ်တွေ့ပျောက်ကင်းခဲ့တာမို့ ဒီ post လေး ရေးပါရစေ
ခံရခက်တဲ့ လည်ပင်း ကျီးပေါင်း ရောဂါ ကျွန် မ ကိုယ်တွေ့ပျောက်ကင်းခဲ့တာမို့ ဒီ post လေး ရေးပါရစေ…. February 10, 2019 ကျီးပေါင်း ကိုယ်ဟာ အမြဲတမ်း ခေါင်းမူး အကြောတက် ခါးနာ အမြဲ ဖြစ်နေ တတ်တယ် ။ သာမန်ပဲ ထင်လို့ နီးစပ်ရာ ဟိုဆေးသောက် ဒီဆေးသောက် နဲ့ နေခဲ့ တယ် ။ နောက်ပိုင်း ခေါင်းမူး စိတ်လာတယ် ၊ ကိုယ် ဘယ်ဘက်ခြမ်းက ထုံကျဉ် လာတယ် ၊ ခါးလေးနည်းနည်း ကုန်း လိုက် တာနဲ့ တောင် ဘယ် ဘက်ခြမ်းက ကျဉ်ပြီး …
အဆီပိုတွေကို ရှင်းထုတ်မယ်…. အရမ်းဝတဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အတွက် ၁၀ ရက် အတွင်းမှာ ၂၂ ပေါင် ကျစေ ပါသည် ။ အနည်းငယ်သာဝတဲ့ သူဆိုရင် ၁၀ ပေါင် နီးပါး ကျ ပါ တယ် ။ တစ်ရက်ကို ၁၅ မိနစ်၊ မိနစ် ၂၀ လမ်း လျှောက် ပေးရုံပါပဲ ။ ဒီ Diet Plan ကို လုပ်မယ်ဆိုရင် သကြား နဲ့ ဆား လုံးဝ မစားရပါဘူး ။ အချိုရည်လည်း လုံးဝ မသောက်ရပါဘူး ။ အရည် သောက် မယ် ဆိုရင် …
ဆီးချိုရောဂါအတွက် ရွေးချယ်စားသုံး ပေးသင့်တဲ့ ကန်စွန်းဥ
ဆီးချိုရောဂါအတွက် ရွေးချယ် စားသုံးပေးသင့်တဲ့ ကန်စွန်းဥ ကန်ဇွန်းဥကို မီးဖုတ် ( သို့ ) မီးကင် ပြီး စား စား ၊ ပြုတ်ပြီး စား စား အရသာ ရှိလှ ပါတယ် ။ အရောင် အမျိုးမျိုး ရှိတဲ့ ကန်ဇွန်းဥကိုလည်း ဈေးကွက် မှာ ဝယ်ယူ စားသုံး နိုင်ပါတယ် ။ ကန်ဇွန်းဥကို စားသုံး ရင် ကျန်းမာရေး အကျိုး ကျေးဇူး တွေ ဘယ်လို ရနိုင်မလဲ ။ ၁ ။ ဆီးချို ဆီးချို ဝေဒနာရှင် တွေအတွက် ကန်ဇွန်းဥကို ရွေးချယ် စားသုံး …
ရုပ်ရှင်ရုံမှာ နိုင်ငံတော်အလံကို အလေးမပြုရင် ထောင် (၃)နှစ် ချနိုင်ဟု ဆို
ရုပ်ရှင်ရုံမှာ နိုင်ငံတော်အလံကို အလေးမပြုရင် ထောင် (၃)နှစ် ချနိုင်ဟု ဆို February 9, 2019 ပြီးခဲ့တဲ့ လပိုင်းအတွင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင်ကြည့် ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ အငြင်းပွားခဲ့ရတဲ့ ကိစ္စတစ်ခု ကတော့ ရုပ်ရှင်မပြခင် နိုင်ငံတော်အလံ အလေးပြုချိန်မှာ မတ်တပ်ရပ်သင့် ၊ မရပ်သင့်ဆိုတာပါပဲ။ ယနေ့ မှာတော့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (Yangon Hluttaw) Facebook Page မှာ မြန်မာနိုင်ငံ အလံ အလေးပြု ခြင်း အစီအ စဉ်မှာ မတ်တပ် ရပ်ပြီး အလေးမပြု သူတွေကို စည်းကမ်း လိုက်နာအောင် ဆောင် ရွက် ပေး နိုင် ခြင်း ရှိ …
ရုတ်တရက် လေဖြတ်ခံရသော လူနာကို အမြန် ကယ်ဆယ် ကုသနည်း
ရုတ်တရက် လေဖြတ်ခံရသော လူနာကို အမြန် ကယ်ဆယ် ကုသနည်း February 8, 2019 တရုတ်ရိုးရာ နည်းလမ်းပါ လေဖြတ် ( ၁ ) လေဖြတ်သော လူနာကို ( မည်သည့်နေရာတွင် ဖြစ်စေ ) ဖြစ်သော နေရာမှ ရွှေ့ပြောင်းသယ်မခြင်း မပြုရပါ ။ ထိုသို့ ချက်ခြင်း ရွှေ့ ပြောင်း သယ်ဆောင် ပါက ကား ဆောင့်ခြင်း အစရှိသော လှုပ်ရှားခြင်း ဒဏ်များ ကြောင့် ဦးနှောက် သွေးကြော ငယ် များကို လျှင် မြန် စွာ ပေါက်ကွဲ စေပြီး လူနာ၏ အခြေအနေကို …